Inverquark technology na mepụtara Aquark Electric Ltd. Mgbe afọ nke mmepe na nyocha, na 2017, ndị pụrụ iche Inverquark technology e ọma ulo oru na ọdọ mmiri ụlọ ọrụ. Ọ bụ ihe kasị nkịtị & ike ịzọpụta inverter ọdọ mmiri kpo oku ngwọta. Ya isi na-eme na-stepless DC Inverter, pụrụ iche inverter ọdọ mmiri akara usoro na ọgụgụ isi nchebe.
Inverquark si isi technology bụ stepless DC inverter. Ọ adopts stepless inverter Compressor na DC brushless ofufe moto. The ọsọ ike gbanwee otu gafere hertz site onye gafere hertz na otu gburugburu otu gburugburu, nke na-enye ịtụnanya ike ịzọpụta arụmọrụ ma oké nkịtị.
Inverquark si akara usoro na-akpan mere maka ọdọ mmiri kpo oku. Ọ nwere ike ịgbanwe kpo oku ike kpomkwem dị ka dị iche iche kpo oku ọnwụ na a ọdọ mmiri oge. The imewe na nkà ihe ọmụma bụ iji nweta ngwa ngwa kpo oku site elu na-agba na mmalite nke oge, na mma ike ịzọpụta na ndị fọdụrụ nke oge site na ala na-agba.
Inverquark nwere ike imeghari obosara voltaji na eji usoro dị iche iche siri ike ọnọdụ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na e ọkụ eletrik elu ma ọ bụ ogbenye ventilashion, usoro nwere ike ịkụda amamihe maka ala na ime. N'ihi ya, ọ na-eweta adịte ndụ aka karịa omenala on / anya okpomọkụ mgbapụta.
Okwu: Keyuan Abụọ Road, Gaoli Development Mpaghara, Ronggui, Shunde District, Foshan, PRChina 528306
Ekwentị: + 86-20-3781 4693